UMengameli waseTurkey uyaqhubeka nokuvukuza izitha - Bayede News
UMengameli waseTurkey uyaqhubeka nokuvukuza izitha
Kubonakala esazoqhubeka nokuphathwa ikhanda amazwe owomhlaba ngeTurkey. UMengameli wakuleli lizwe uRecep Tayyip Erdogan usetshele uMengameli waseRussia uVladimir Putin ukuthi amazwe omhlaba kumele ayifundise isifundo engeke yasikhohlwa i-Israel. Ukusho lokhu nje ibambene ngezihluthu phakathi kwe-Israel neqembu lasePalestine elizinze eGaza iHamas kulandela ukuxoshwa ngendlela enokuhlambalaza abasePalestine abebekhuleka e-Al-Aqsa Mosque esempumalanga yeJerusalema.
Bakhuleka lapha nje bagoqa inyanga engcwele ngokwenkolo yobuSulumane iRamadan. Lesi sigameko sihelele emibhikishweni esuka kuzona zombili izinhlangothi amaJuda akwa-Israel namaSulumane asePalestine okuthe uma kungenelela iHamas ngokuthumela isikhali esiqhumayo njengesexwayiso i-Israel yaphendula ngendluzula nangesankahlu nokuyinto esekuyifakele amehlo amazwe omhlaba. U-Erdogan unguMengameli osekwazile ukwenza iTurkey ibaluleke kupolitiki yomhlaba kodwa lokhu ukwenza ngendlela enodlame nochuku. Lo mholi uletha ukudideka kubaholi abaningi ngoba akuqondakali ukuthi ufunani, ambona njengomngani futhi njengesitha.
Uphawula sakugadla ku-Israel nje emavikini amabili edlule ubenomhlangano wocingo noMengameli wase-United States of America (USA) uJoseph Biden Jr bexoxa ngokuthi bazosebenzisana kanjani. Kulo mhlangano udaba oluthinta i-Israel nePalestine lwaba ngesinye sezihloko uBiden wathembisa u-Erdogan ukuthi uzoba yingxenye yabazoxoxa ngesisombululo phakathi kwala mazwe. UBiden ukwenza lokhu nje u-Erdogan kade aqala ukuyisonta ingalo i-USA njengoba nasezingxoxweni zokubuyisana kukaHulumeni wase-Afghanistan neTaliban iTurkey kuyiyo abadidiyeli kwazise nemihlangano ibanjelwa edolobheni layo i-Istanbul.
U-Erdogan ngokukholelwa ukuthi asikho isixazululo saseMiddle East nase-Europe esingenzeka ngaphandle kwakhe, wazishutheka yena kulezi zingxoxo. Okungakho kuxaka uma esephinde esesongela abahlobo bayo i-USA ekubeni kwaba nesivumelwano sokuthi kuzosetshenziswana kanjani. I-USA nakuba ingemsulwa kodwa nezenzo zakhe u-Erdogan zakamuva zokuxosha nokucindezela bonke ababona njengabahalela isikhundla sakhe iyakuziba yize kunengcindezi eqhamuka emazweni omhlaba ukuthi ingenelele. Kukhulu ukungezwani phakathi kukaNdunankulu wakwa-Israel uBenjamin Netanyahu no-Erdogan njengoba behlezi behlinzelana ezibini omunye esola omunye ngokuba ngumbulali kodwa okuthinta umdonsiswano we-Israel nePalestine uvele usamenywa ukuthi abe ngabanye abaqhamuka nesisombululo. Lokhu kuyefana nakwenza ku-European Union (EU) njengoba nakuba enobudlelwano nale nhlangano kodwa akazamukeli izixazululo zayo embangweni weTurkey neGreece othinta isiqhingi esicebe ngowoyela la mazwe asihola ngokubambisana iCyprus. Kamuva nje u-Erdogan ukusho kugcwale umlomo ukuthi sonke lesi siqhingi singeseTurkey. Embangweni wakhe neGreece uze wasebenzisa uhlelo lwe-EU lokutakula abasuka emazweni anezimpi eMiddle East yena waqhubeka nokubathumela eGreece nakuba esetsheliwe ukuthi sekwanele.
nguNtobeko Shozi May 14, 2021